Endri-javatra sy ny fampiharana ny zana-tsipìka voalambolambo-tsy visy conveyor
(1) mitsangana visy conveyor
Ny hafainganam-pandehan'ny miodina ny visy ny mitsangana visy conveyor dia ambony kokoa noho ny an'ny olon-tsotra conveyor visy. Eo ambany ny hetsika ny centrifugal hery, friction dia niteraka eo amin'ny ara-nofo sy ny fefy. Izany friction misakana ny zavatra tsy miodina miaraka amin'ny miolakolaka vary sy mandresy ny maha ara-nofo ny nipotrapotraka, dia toy izany no tonga saina mitsangana fampitana ny material.This milina pitaterana be dia kely, dia kely haavon'ny pitaterana, miodina hafainganam-pandeha dia avo, no fanjifàna angovo big.It tena mety ho fampitana granular powdery sy ny fitaovana amin'ny fluidity tsara, izay tena ampiasaina ho fitaovana manainga. Ny haavon'ny fanandratako amin'ny ankapobeny tsy mihoatra 8 metatra.
(2) marindrano visy conveyor
Raha ara-nofo ho raikitra ao amin'ny slot milina, noho ny maha 'ny ara-nofo sy ny vokany sy ny disadisa eo amin'ny slot milina, fitaovana piling ny eo amin'ny farany ambany amin'ny milina tsy hanodinana ny amin'ny helix, ary afa-tsy ny miodina helical Vane noroahina ny mandroso, toy ny tsy miodina bazana nanaraka ny fihodinan'ny ny visy ho an'ny translational sarimihetsika, mba hahatratra ny tanjon'ny hampita material.The milina dia mety ho maro-teboka Loading sy mampidina entana avy, ary azo mifangaro, na nanome fo tony mandritra ny fampitana miara-mivoaka. Mora tohina amin'ny be loatra, mora-tsipiriany; Ny ara-nofo dia nanorotoro very, ny rafitry ny marindrano visy conveyor kely saina, dia mora ny hametraka, foana sy troubleshoot.
Mety amin'ny mitsivalana na kely tia mitohy Mampita fanamiana ara-nofo mahamenatra, ny tontolo iainana miasa mari-pana dia -20 ~ 40 ℃, ny mari-pana ara-nofo noho ny fampitana - 20 ~ 80 ℃ .Its miodina hafainganam-pandeha dia somary ambany raha oharina amin'ny ny mitsangana conveyor, indrindra nampiasaina marindrano na bitika na fironana ho an'ny fitaovana famindrana, ny fitaterana lavidavitra dia amin'ny ankapobeny tsy lehibe noho 70 metatra.
(3) Sokiro sodina (-roller conveyor) conveyor
Ny miolakolaka Tube conveyor dia mitohy miolakolaka hareza welded ao anatin'ny cylindrical akorany, ny cylindrical akoran'ny ary mihodinkodina amin'ny lelan miolakolaka miaraka. Noho ny centrifugal hery sy friction, ny nanampy zavatra ary mihodinkodina amin'ny trano sy ny miavonavona, ny fanazavana eo ambany asa ny hery misintona sy ny tsary teny an-miolakolaka ambonin'ny, manao ny fanazavana amin'ny miolakolaka sodina fihodinan'ny, mba hahatakatra ny fitaovana mba handroso, toy ny tsy miodina nanaraka ny fihodinan'ny ny visy-bazana ny translational sarimihetsika, mba hahatratra ny tanjona ara-nofo ny fampitana.
Low fandaniana angovo sy ny fikojakojana vidin'ny ambany; Rehefa nandrasana amin'ny farany, dia mety zatra ny fepetra takiana ny uneven sakafo, ary mety hamita teknolojia isan-karazany toy ny fampitana fepetra ka hampisy ary miaraka amin'izay koa fampifangaroana time.It no mety mba hampidiran'izy sy notaterina multi-teboka, ary afaka mampita fitaovana amin'ny mari-pana ambony. Mety amin'ny horizontal fampitana ny hafanana avo fitaovana; Izany dia hifanaraka amin'ny zava-tsara ny fitaovana avo hafanana, uneven famatsiana ara-nofo, manohitra ny fanorotoroana sy ny anti-fandotoana fepetra, ary koa ny dingana maro mitaky-teboka Loading sy mampidina entana avy. Fomba fanao efa hita fa mahomby amin'ny simenitra nitatitra clinker, maina vatosokay, phosphate akora, ilmenite vovoka, arina sy ny tain-drendrika.
Ny sombiny haben'ny koa ny zavatra Inlet amin'ny farany dia tsy ho lehibe noho 1/4 savaivony ny visy. Ny sombiny haben'ny fitaovana avy amin'ny fahana Inlet kafa dia tsy ho lehibe noho 30mm. Mba hiantohana ny Varingarin'i tsy mamokatra deformation, mamaly ny mari-pana dia tsy maintsy fehezina eo ambany ℃ 300. Ny abrasion ny vary sy ny tavy fisotroana no tena lehibe, rehefa fampitana akora.
(4) malefaka visy conveyor
Ny visy mandrel io milina dia malefaka, toy izany koa ny fampitana tsipika azo fandaharana araka izay nahafeno curve. Araka ny ohatry ny marindrano sy mitsangana (lehibe mandroboka) fizarana ao amin'ny fisehon'ny tsipika, ny miasa fitsipika dia natao araka ny olon-tsotra na mitsangana visy conveyor conveyor visy.
Fa ny fifindran'ny tsipika mila azo alaina nanao fandaharana araka izay nahafeno curve mba tsy ny toe-javatra ara-nofo famindrana; Rehefa be loatra ara-nofo na ara-nofo mafy dia nataony tao an-milina akorany, ny miolakolaka dia mitsingevana malalaka tsy misy tabataba dia small.It blocking.The no tena ampiasaina ny marindrano sy mitsangana fampitana ny boky ara-baiboly izany fotoana izany. Ny hafainganam-pandehan'ny fihodinan'ny no ankapobeny maintsy ho ambony kokoa noho 1000r / min amin'ny fandefasana mitsangana.
Post fotoana: Aug-15-2018